Ny fianakaviana dia misoratra anarana amin'ny antontan-taratasy manan-danja sy fahatsiarovana manan-danja amin'ny fotoana iray
Ny faniriana fiaraha-miasa marin-toerana sy ny fananganana ny ankohonany dia hisy foana. Sambatra ireo nahita ny sakaizany nofinofy. Rehefa avy nifankahalala sy niara-nifindra izy ireo dia nipoitra matetika ny faniriana hanana fianakaviana iray manokana, ka mpivady maro no manapa-kevitra ny hidina eo alohan'ny alitara. Fa maninona izao no misy boky fianarana izao?
Inona no ilainao boky fianarana?
Fanambadiana ho fanombohana ofisialy ny fianakaviana: miaraka amin'ny fanambarana ny fanambadiana, ny famoronana fianakaviana eo anelanelan'ny olona roa dia tononina amin'ny fomba ofisialy. Manomboka izao dia ekena ho fianakaviana iray ity firaisan-kina ity ary horaisina toy izany eo anatrehan'ny lalàna.
Rakitra ho an'ny fianakaviana - © Kristina Kirsten / Adobe Stock
Aorian'ny voadim-panambadiana, dia mahazo taratasy fanamarinana ofisialy ny mpivady, izay manoratra io fatorana manokana io. Ity taratasy fanamarinana ity dia mety ho lasa manan-danja tokoa amin'ny fiainana lavitra - ohatra, mifandraika amin'ny fahaterahan'ny zaza.
Ny bokim-pianakaviana ho antontan-taratasin'ny fianakaviana tsirairay
Ny mari-pahaizana momba ny fanambadiana dia matetika no taratasy fanamarinana voalohany raisin'ny fianakaviana amin'ny maha-fiaraha-monina ekena azy. Mba hahafahan'ity antontan-taratasy manokana ity hitandrina ho azo antoka sy azo idirana foana, ao ireo antsoina hoe "firaketana momba ny fianakaviana".
Ny boky firaketana ny fianakaviana dia mpamatsy peratra tena izy izay ahafahan'ny antontan-taratasy maro avy amin'ny tantaram-pianakaviana azo amboarina amin'ny fomba voalamina tsara. Ho fanampin'ny taratasy fanamarinana ara-panambadiana dia tazonina eto ihany koa ny taratasim-piterahan'ny zaza. Miankina amin'ny kinova vokatra, ny topy maso ny anarana voalohany malaza indrindra dia omena ao amin'ny tovana koa.
Amin'ny maha-isam-pianakaviana tsirairay azy, dia tokony hotehirizina koa ny firaketana ny fianakaviana. Ankoatry ny volavola mahazatra dia misy ihany koa ireo vokatra manokana mampiavaka ny kojakoja manokana. Ireo boky dia tsy vitan'ny hoe tsy mitovy amin'ny fonony ara-materialy (oh: velvet), fa manana fahasamihafana amin'ny endriny ihany koa. Ny fo malina eo amin'ny fonon'ny boky dia azo ampiharina ary koa diamondra kely na sarin'ny hazo (mariky ny fitomboan'ny fitiavana).
Ireo boky fianarana dia efa manana ny endriny mifanentana aminy mba hamenoana sy hamerenan'ny tompon'andraikitra tompon'andraikitra ireo taratasy ireo aorian'ny hetsika mifandraika amin'izany (fanambadiana, fahaterahana, batemy, sns.).
Ny boky fianarana dia tsy vitan'ny hoe manana anjara toerana lehibe amin'ny fanapahan-kevitra lehibe momba ny fianakaviana, fa mampiseho ny tantaran'ny tsirairay avy amin'ny fianakaviana tsirairay. Izy ireo dia matetika ampitaina amin'ny taranaka mifandimby mba hitazomana ny tantaram-pianakaviana.
Mitadiava ny bokin'ny fianakavianao manokana
Amin'ny ankapobeny, tsara raha manokana fotoana ampy ianao hisafidianana ny boky fianaranao manokana. Rehefa dinihina tokoa, ity boky ity dia hiaraka amin'ny fianakavianao mandritra ny androm-piainany. Manolotra kinova momba ny vokatra marobe ny Internet, ka tokony hisy boky sahaza ho an'ny mpanjifa tsirairay.
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 29. Janoary 2021 15. Jolay 2021 Sokajy Fianakaviana & fiaraha-miasaKeywords family, ankizy, fiaraha-miasa, Boky fandalinana
indray Lahatsoratra taloha: Tokony hamaky tsy tapaka koa ny olon-dehibe
more Lahatsoratra manaraka: Inona no atao hoe hatsaran-tarehy | Fomba fiaina sy fahasalamana